गर्मी बढ्यो, शरीरलाई शीतलता दिन खानुहोस् यस्ता फलफूल ! – List Khabar
Home / स्वास्थ्य / गर्मी बढ्यो, शरीरलाई शीतलता दिन खानुहोस् यस्ता फलफूल !
admin2weeks ago स्वास्थ्य Leaveacomment 40 Views
गर्मी बढेसँगै शरीरमा पानीको कमी हुने समस्या देखापर्छ । जस कारण विभिन्न रोग लाग्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । गर्मीमा अत्यधिक पसिना बग्ने तथा आन्तरिक रुपमा पनि पानी बढी खपत हुने हुँदा शरीरमा पानी कमी हुने गर्छ । यसर्थ यसबाट जोगिन खानपिनमा ध्यान दिनुपर्छ ।शरीरमा गर्मीको महसुस बढी हुँदा खाना खान मन नलाग्ने समस्याले विभिन्न रोगको संक्रमण हुन्छ । यसबाट जोगिन पानी र तरल पदार्थ प्रशस्त पिउने र फलफूलहरु खाने गर्नुपर्छ । कुन कुन फलफुल खाने ?
१. खरबुजा / गर्मी मौसममा खरबुजा खाँदा शरीरमा पानीको पूर्तिमात्रै होइन चिनीको मात्रासहित धेरै खनिज पदार्थ, भिटामिन र थोरै क्यालोरी पनि पाइन्छ । यसमा पाइने भिटामिन ए ले कपाल र छालालाई पनि राम्रो गर्छ। यसमा पाइने फाइबरले पाचन प्रणालीलाई सहयोग र्पुयाउनुका साथै कब्जियत हुनबाट पनि जोगाउँछ। यसमा ९२ प्रतिशत पानीको मात्रा हुन्छ ।
२. स्याउ / स्याउमा पाइने फाइबर, एन्टीअक्सिडेन्ट, भिटामिन बी कम्प्लेक्स जस्ता तत्वले गर्मीबाट जोगाउँछ । साथै स्याउमा पोटासियम, क्याल्सियम र फस्फोरस पनि अधिक मात्रामा पाइन्छ ।
३. मेवा / गर्मीमा खानै पर्ने अर्काे फल हो– मेवा । मेवा खाँदा छालालाई डढ्नबाट जोगाउन सहयोग गरी उपयुक्त सनब्लकको काम गर्छ । यसले मुटुका रोग, मधुमेह, क्यान्सरबाट बचाउन मद्दत गर्नुका साथै ब्लड प्रेसर घटाउँछ साथै घाउ पनि छिटो निको पार्ने काम गर्छ ।
४. काँक्रो / काँक्रो पनि गर्मीमा खाँदा लाभदायिक हुन्छ । यसमा ९५ प्रतिशत मात्रा पानी पाइन्छ।समा रहेको फाइबरको मात्राले कब्जियत हुनबाट जोगाउँछ। यसमा सोडियम, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रोलको मात्रा निकै कम पाइन्छ। काँक्रा काटेर माथिबाट थोरै वीरे नून छर्केर खानुस् वा दहीमा मिलाएर खानुस् तपाईं उत्कृष्ट स्वाद पाउनुहुन्छ साथै शरीरलाई शीतलता पनि ।
५. भूइँकटहर / गर्मीमा खान छुटाउनै नहुने भूँइकटहर पनि हो । छाला र स्वास्थ्यका लागि निकै नै उपयोगी फल भूँइकटहरमा भिटामिन सी धेरै मात्रामा पाइन्छ जसले शरीरमा रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढाउँछ ।
६. केरा / केरा खानाले चिसो महसुस गराउनुका साथै ब्लड प्रेसर, आज्मा र क्यान्सरको जोखिम पनि घटाउँछ। यसमा धेरै मात्रामा कार्बोहाइड्रेट्स र फाइबर पाइन्छ । गर्मीमा धेरै झाडापखालाको समस्या पनि भोगिरहेका हुन्छौँ ।यहाँ हामीले सम्बन्धित थप जानकारी दिइएका छाै |
नुहाएपछि छाला फुस्रो हुने समस्याबाट हैरान हुनुहुन्छ ? त्यसको समधानका लागि स्वंयमले सजकता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ। तपाइहरूलाई आँफ्नो स्किनलाई कसरी केयर गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्ता बढी रहेको हुनसक्छ । तपाँईलाई त्यस्तो चिन्ता लागेको छ भने अब बिभिन्न घरेलु उपाएबाट पनि तपाईले आँफ्नो स्किनलाई केयर राख्न सक्नु हुनेछ । जसको लागि तपाँईले बिभिन्न उपाए अपनाउदा समधानका लागि स्वंयमले सजकता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
छालालाई कसरी बचाउने ? नुहाउँदा तातो पानी प्रयोगगर्ने, तातो पानीले शरीरमा हुने प्राकृतिक तेल नाश गरेर छाला रुखो बनाउँछ । चिसो मौसममा तातो पानीले नुहाउन सजिलो भएपनि यसले छालालाई रुखो तथा फुस्रो बनाउँछ ।मस्चराइजर लगाउने, छाला स्वस्थ राख्ने हो भने नुहाएलगत्तै मस्चराइजर लगाउनु जरुरी छ । नुहाएपछि पूरै शरीरमा मस्चराइजर गर्नुपर्छ । पहिलोपटक लगाएको एक घन्टापछि पनि छालामा रुखोपन देखियो भने दोस्रोपटक मस्चराइजर लगाउनुपर्छ ।
पानीमा तेलको मिश्रण, नुहाउनुअघि पानीमा जैतुन या बदामको तेलका केही थोपा राख्दा राम्रो हुन्छ । यसले छाला नरम बनाएर राख्छ । बास्नादार साबुन प्रयोग, साबुन जति बास्नादार हुन्छ उति नै केमिकल मिसाइएको छ भन्ने जान्दा हुन्छ । केमिकलयुक्त साबुनले छाला रुखो बनाउँछ । साबुन प्रयोग नै गर्ने भए घ्युकुमारी र निमबाट बनेको रोेज्दा अति उत्तम देखिन्छ । हनी प्याकको प्रयोग,मह छालाका लागि निकै नै उपयोगी चिज हो । मह र दहीको प्याक बनाएर पूरै शरीरमा लगाउने र सुकेपछि नुहाउँदा छाला रुखो बन्दैन । तीन हप्तामा एकपटक यसो गर्दा सकारात्मक परिणाम आउँछ ।
छालालाई स्वस्थ कसरी राख्ने ?छालालाई कसरी राम्रो देखाउने वा स्वस्थ कसरी राख्ने भन्ने बारेमा धेरैले अनेक थरि उपाय गरिरहेता पनि केही यस्ता सामान्य तरिका साथै घरमा सधैजस्तो प्रयोग भइरहने सामान अनि खानेकुराहरु प्रयोग गरेर पनि छालालाई राम्रो अवस्थामा राख्न सकिन्छ । छालाको गोरोपनको साथै चमक ल्याउन भिटामिनहरु र पानीको प्रशस्त सेवन जरुरी हुन्छ। सकेसम्म सुर्यको प्रकाशबाट बचाउने गर्नुपर्छ संवेदनशील छालालाई ।के के गर्ने छालाको गुणस्तर कायम राख्न ? हेर्नुहोस केही टिप्सहरु।।
देशी बदामको तेल,छाला सुक्खा हुने, फुस्रो हुने, चिलाउने, जलन हुने भएमा देशी बदाम को तेल लगाउने गर्नुस् । यसले तपाईंलाई समस्याबाट मुक्त हुन मद्दत गर्छ । यसको प्रयोगले छालालाई आवश्यक पर्ने चिसोपन प्रदान गरी सुक्खा हुनबाट बचाउँछ । देशी बदामबाट छालालाई आवश्यक पर्ने पौष्टिक तत्त्व प्राप्त हुन्छ र छाला ताजा, चम्किलो, स्वस्थ एवम् नरम हुन्छ ।लिप बाममा कोको–नौनी,प्रायजसो बडी लोसन तथा लिप बाममा कोको–नौनी प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ । यो लगाउने गर्नाले फुटेको छालालाई धेरै फाइदा दिन्छ । साथै सुक्खा छालालाई पनि सुक्खा हुनबाट बचाइराख्छ । कोको–नौनीमा एन्टिअक्सिडेन्टको गुण भएकाले छालालाई चिसोपन बनाई नरम राख्न पनि मद्दत गर्छ ।
सूर्यमुखी तेल,सूर्यमुखी तेलमा भिटामिन ए, बी, सी,डी र ई प्रशस्त हुन्छ । त्यसैले छालामा यसको प्रयोग गर्नाले सुकेको तथा बिग्रेको छालामा सुधार हुन्छ । अनि नरम, कलिलो र चिसोपना गराइराख्न सहयोग गर्छ । यो तेल स्वास्थ्यवद्र्धक पनि हो । नीमको तेल,नीम एक बहुउपयोगी रुख हो । यो रुखका प्रत्येक भाग विभिन्न प्रयोजनका लागि उपयोगी हुन्छ । स्वास्थ्योपचारमा, खेतीपातीमा, सौन्दर्य सामग्रीहरुमा यसको धेरै उपयोग हुने गरेको पाइन्छ ।शरीर चिलाउने र छालामा रातो–रातो देखा पर्नेहरुका लागि यो तेलको सेवन प्रभावकारी मानिन्छ । चाउरीपन हटाउने कार्यका लागि पनि यो तेल सेवन गर्नु बडो प्रभावकारी देखिएको छ । यसमा एन्टिसेप्टिक गुण पनि छ । सुक्खा छालालाई चिसो गरिराख्न धेरै मद्दत गर्छ ।
काँक्रो’ काँक्रो स्वास्थ्यका लागि धेरै लाभदायी रहेको अनुसन्धानको सिलसिलामा प्रमाणित भइसकेको छ । यो खानको लागि मात्र नभई सौन्दर्य बढाउनमा पनि विशेष उपयोगी देखिएको छ । काँक्रोको सेवनले छालालाई चिसोपन र ताजा बनाइराख्न मद्दत पुर्याउँछ । यसको प्रयोग अनुहारको छालामा पनि गर्न सकिन्छ । बिग्रेका छालालाई स्वस्थ बनाउन पनि काँक्रो सहयोगी हुन्छ । घिउकुमारी, आजकल घिउकुमारीका बारे निकै चर्चा हुने गरेको छ । यसमा हुने बहुउपयोगी गुणका कारण स्वास्थ्य र सौन्दर्य क्षेत्रमा यसको धेरै प्रयोग हुन्छ । यसलाई छालामा प्रयोग गर्दा छाला नरम पार्छ, सुक्खा हुन दिँदैन र प्राकृतिक हानिकारक अल्ट्राभायोलेट किरणबाट बचाइराख्ने गर्छ ।
Previous असारदेखि नयाँ भर्ना शुरु गराउँदै शिक्षा मन्त्रालय
Next सङ्क्र-मण घट्यो, लाप-रबाही बढ्यो !